Ka qaybqaado | Centraal Orgaan opvang asielzoekers
Wax goob ah madooran, dooro hal goob/meel
Si aad shaqo uga hesho Nederlaan, waa in aad ku shaqaysan kartaa xirfad, waana in aad ku hadli kartaa Dutch ku filan. Waxa kale oo muhiim ah inaad ogaato sida dadku ugu dhaqmaan jawiga shaqada ee Nederlandka iyo xirfadaha shakhsiyeed ee aad u baahan tahay. Kuwani waa waxa loogu yeero xirfadaha jilicsan.
Bogaggaan waxaad ka heli doontaa macluumaad ku saabsan waxbarashada iyo ka shaqaynta Nederlaan.
Ku soo dhowoow MyCOA.nl
MyCOA.nl waa website-ka degganayaasha xaruunta qaabilista ee COA. Waxa aad adiga halkaas ka heleysaa warbixin badan oo ku saabsan degitaanka iyo nolosha Nederland. Website-kan waxa uu ku siinayaa warbixin waxtar ah oo ku saabsan ku noolashaha azc.
Xulo luqadda aad doorbideyso
Xidhiidhin deg deg ah